P90X3 Kubatsira: 6 FREE BHONI Zvipo + FREE Shipping Upgrade
musha » Beachbody » P90X3 Kubata: Gamuchira 6 FREE BHURI Zvipo + FREE Shipping Upgrade
Tsvaga 6 FREE Bonus Zvipo + zve FREE FREE kusvika Express Express neyi P90X3 Deal
Tenga P90X3 Ikozvino-Zvipo zvakabatanidzwa nekutenga!
P90X3 inobatanidza zvakasiyana-siyana zvisati zvamboitika zvinoita kuti mishonga yose ichinetse zuva nezuva kwehafu yeawa yekuzara-kupisa simba nehurongwa hwakanyatsogadziriswa, unotasva-busting neinosiya mamwe mapurogiramu ezvokuvhima muvhu. P90X3 ibasa rakazara raunokwanisa kuita mukati hafu yenguva.
Ndeapi Workouts Unowanikwa NaP90X3?
P90X3 ine 16 yakasimba yehafu yenguva yekushanda
Zvokushandisa zvinosanganisira mitanhatu yekudzivirira kushandiswa kwemisimba, zvitatu zvekudzidzira simba simba rekudzidzira simba, mana ekugadzirisa mafashoni
& balance workouts, uye zvitatu zvekurovedza kudzidzira
Ndezvipi Zvipo zveBhonus?
Chipo chebhonasi #1: Fitness Guide - Iyi fitness P90X3 mutungamiri inotungamira nhanho-nhanho yekuwana zvakanakisa purogiramu iyi yakakwana yehutano.
Chipo chebhonasi #2: Nhungamiro Inonyorera - Iri gwaro rinopa nzira iri nyore yokudya. Nechirongwa chekudya kunovaka muviri, unokwanisa kuchinja uye kuigadzirisa kuti uenzane nezvinangwa zvako zvepfungwa. Yakagadzirirwa kukubatsira kuwana muviri unoda-uye uchichengetedze nenzira iyoyo.
Chipo chebhonasi #3: P90X3 Kushanda Karenda - Tony anokupa mazuva ose okuvhima, saka zvose zvaunofanira kuita ndezvokupinda uye zvakupa zvakanakisisa
Chipo chebhonasi #4: "How to Accelerate" DVD - Iyi bhonasi DVD iri nyore kutevera. Icho chirevo cheP90X3 chinokuratidza kuti ungaita sei zvakanakisisa zvinogumira munguva inokurumidza.
Chipo chebhonasi #5: Pro-Grade Resistance Band - Izvi zvinokurudzirwa kwepakutanga zvingakubatsira kuti uchengetedze misumbu yako inopesana nokukupa nekumiririra kwakakodzera.
Chipo chebhonasi #6: 24 / 7 Online Kutsigira - Ramba uchikurudzirwa nehuwandu hwe "round-the-clock access to Expert Fitness Experts uye P90X3 peer support.
Iwe unogona kutenga P90X3 ye 3 kubhadhara kwemwedzi we $ 39.95 (+ $ 19.95 kutumira nekushambadzira) kana unogona kusarudza imwe chete yekubhadhara pakusarudza.
Dzvanya Chikwata Chasi kune Mamwe Mashoko pamusoro peiyi P90X3 Deal